विलासी जीवनशैली लागी चर्चित छिन् दुबईकी यी राजकुमारी ! - IAUA
ramkrishna November 23, 2017	विलासी जीवनशैली लागी चर्चित छिन् दुबईकी यी राजकुमारी !
दुबईमा थुप्रै राजकुमार- राजकुमारीहरु छन्। तर ति मध्ये राजकुमारी शेख मारा आफ्नो शानदार र विलासी जीवनशैली लागी चर्चित छिन्। उनीसँग संसारकै महँगा कारहरु छन्,उनी स्पोर्टसमा पनि उत्तिकै सोखिन छिन्। राजकुमारी मारा घोडचढीको पनि निक्कै नै सोखिन छिन्।
मारा सामाजिक संजालमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। उनी आफ्नो फोटोहरु फेसबुक र इन्सटाग्राममा पनि पोष्ट गर्ने गर्छिन्,जहाँ उनको हजारौं फ्यानहरु छन्। सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेको उनको फोटोहरु भाईरल हुने गरेको छ।
हालै राजकुमारीले डल्फिनलाई चुम्बन गरेको एक फोटो सामजिक संजालमा निक्कै नै भाइरल भईरहेको छ। paanakhabar
Previous Previous post: जापानमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरुलाई रक्सी सेवन गर्न प्रतिबन्ध
Next Next post: ८ हजार वर्षअघि : जर्जियाको जमिनमुनि माटोका घ्याम्पामा भेटियो ‘संसारकै पुरानो वाइन’